Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Entertainment » Obodo iri kacha mma maka ndụ abalị ụmụ akwụkwọ n'ụwa
Obodo iri kacha mma maka ndụ abalị ụmụ akwụkwọ n'ụwa.
Nleta ụmụ akwụkwọ bụ akụkụ nke ahụmịhe mahadum, site n'izu mbụ gị ka ọ bụrụ nke ọhụrụ ruo mgbe ule ule gasịrị. Ọ bụghị ihe ijuanya na ndụ abalị bụ ihe dị mkpa mgbe ị na -ekpebi ebe a ga -amụ ihe.
Montreal na -apụta dị ka obodo kachasị mma n'ụwa maka ụmụ akwụkwọ n'ihi ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nhọrọ maka ndụ abalị na enweghị ike.
Ọnọdụ abalị na Tokyo nwere ọtụtụ nhọrọ maka ụmụ akwụkwọ nwere ụlọ oriri abalị 1,068 na mkpokọta.
New York City nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara klọb karịa nke abụọ kachasị elu, mana ọtụtụ Ogwe LGBTQ+ n'ụwa niile.
Mgbe elekere kụrụ aka ma ọkụ apụọ, ụfọdụ obodo ama ama n'ụwa na -adị ndụ. Ndị ọkachamara njem njem nyochaala obodo na obodo mahadum dị na mba ahụ iji chọpụta ebe kachasị mma maka abalị nwata akwụkwọ dabere na nguzozi n'etiti ezigbo ịma jijiji na ọnụ ahịa ihe ọ budgetụ budgetụ mmefu ego.
Obodo iri kacha mma maka ụmụ akwụkwọ
Ụlọ maka ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 200,000 na ụmụ akwụkwọ mba ụwa 35,000, Montreal na -apụta dị ka obodo kachasị mma maka ụmụ akwụkwọ ụwa n'ihi ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nhọrọ maka nightlife na nsonye.
n'usoro mmetụta Country Ogbenye n'ozuzu
London bụ obodo nke abụọ kacha mma n'ụwa maka ndụ abalị ụmụ akwụkwọ
Nleta ụmụ akwụkwọ bụ akụkụ nke ahụmịhe mahadum, site n'izu mbụ gị ka ọ bụrụ nke ọhụrụ ruo mgbe ule ule gasịrị. Ọ bụghị ihe ijuanya na nightlife bụ ihe dị mkpa mgbe ị na -ekpebi ebe a ga -amụ ihe.
N'ozuzu, ụmụ akwụkwọ na -ele anya itule nha dị mma, ọnụ ahịa ihe ọ budgetụ budgetụ mmefu ego, yana inwe ọtụtụ nhọrọ.
Obodo iri kacha elu maka ụmụ akwụkwọ na -eme oriri:
n'usoro mmetụta Country Ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri abalị Ọnụ ego otu biya (500ml) Ọnụ ego efu nke mmanya
2 London United Kingdom 1,053 $ 6.81 / £ 5.00 $ 16.35/ £ 12.00
3 Obodo New York, New York United States 593 $ 7.64 / £ 5.61 $ 19.08 / £ 14.00